Tetikasa Fedora: fahalalana ny fiarahamonina misy anao sy ny fivoarany ankehitriny | Avy amin'ny Linux
Linux Post Install | 13/09/2021 06:00 | Fitsinjarana, GNU / Linux
Ao amin'ny Universe misy tetikasa malalaka sy misokatra izay manodidina ny GNU / Linux sy ny Rindrambaiko maimaim-poana sy vondrom-piarahamonina open source, misy tetikasa lehibe sy lehibe misongadina amin'ny isa sarobidy maro. Ohatra, eo amin'ny sehatry ny GNU / Linux Distributions / Communities mijoro Debian, Ubuntu, Mint, Arch ary mazava ho azy, ankoatry ny maro hafa Fedora.
Ary izany dia, ao anatin'ny fantatry "Tetikasa Fedora" misy goavambe sy mahavariana fiaraha-monina tena natokana hananganana milay vokatra sy loharano ho an'ny olona manerantany. Ary amin'ity lahatsoratra ity dia hijery kely amin'izy ireo isika.
Ary satria tsy vao izao no ifandraisantsika amin'ny fampahalalana manokana mifandraika amin'ny "Tetikasa Fedora", hiala avy hatrany eto ambany ny sasany amin'ireo rohy farany momba ny anay izahay Lahatsoratra mifandraika. Mba hahafahan'izay liana hijery azy ireo rehefa vita ity boky ity:
"Ny kinova azo antoka an'ny Fedora 34 dia efa navotsotra ary vonona ny alaina. Ity kinova vaovao an'ny Fedora 34 ity dia misy andiam-panatsarana miavaka izay mendrika ny hojerena, satria fanovana maro no mifandraika amin'ny fanatsarana ny zava-bita ary indrindra ny fikirakirana ny fitaovana.
Ohatra: Ny renirano audio rehetra dia nafindra tany amin'ny mpizara haino aman-jery PipeWire, izay lasa toerana misy anao ankehitriny fa tsy PulseAudio sy JACK. Ary ankoatry ny PipeWire izay ambony amin'ny lafiny maro, dia raisina ihany koa ny fampiasana Wayland." Efa navotsotra ny Fedora 34, fantaro izay vaovao
1 Tetikasa Fedora: Sehatra vondrom-piarahamonina sy lozisialy
1.1 Inona ny Tetikasa Fedora?
1.2 Inona ireo fivoarana sy loharano atolotra anao amin'izao fotoana izao?
1.2.1 Tetikasa lehibe
1.2.2 Tetikasa vao misondrotra sy loharanom-pahalalana azo ampiasaina
Tetikasa Fedora: Sehatra vondrom-piarahamonina sy lozisialy
Inona ny Tetikasa Fedora?
Araka ny hevitry ny tranokala ofisialy do "Tetikasa Fedora", faritana fohifohy hoe:
"Sehatra loharanom-baovao vaovao, maimaimpoana ary malalaka ho an'ny fitaovana, rahona ary kaontenera, ahafahan'ny mpamorona lozisialy sy ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina hanangana vahaolana manokana ho an'ireo mpampiasa azy."
Mandritra izany fotoana izany dia manitatra ny azy ireo izy ireo famaritana sy ny sakany toy izao manaraka izao:
Ny tetikasa Fedora dia vondron'olona miara-miasa amin'ny fananganana sehatra rindrambaiko malalaka sy malalaka ary hiara-hiasa sy hizara vahaolana mifototra amin'ny mpampiasa naorina eo ambonin'io sehatra io. Na, raha tsorina, dia mamorona Rafitra Miasa sy manamora ny fanaovanay zavatra mahasoa amin'izany izahay.
Inona ireo fivoarana sy loharano atolotra anao amin'izao fotoana izao?
Anisan'ireo tetikasa sy loharanon-karena ankehitriny sy ankehitriny, mendrika ny hanasongadinana sy hamariparitra fohifohy an'ity manaraka ity:
Fedora Workstation: Izy io dia rafitra miasa azo antoka, mahery ary mora ampiasaina amin'ny solosaina finday sy ny birao. Izy io dia noforonina ho tena miasa ho an'ny mpamorona maro karazana, manomboka amin'ny fialamboly sy mpianatra ka hatrany amin'ireo matihanina amin'ny tontolon'ny asa aman-draharaha. Manolotra tontolon'ny Desktop GNOME 3 miaraka amina fanangonana fitaovana open source feno izy.
Server Server: Izy io dia rafitra mpikirakira lozisialy tohanan'ny vondrom-piarahamonina, izay manome ny mpitantana traikefa amin'ny fidirana amin'ny Operating System amin'ireo teknolojia farany misy ao amin'ny vondrom-piarahamonina misokatra. Anisan'ireo mampiavaka azy ny maodelim-pahefana avo lenta (fikirakirana kinova fampiharana sy fiteny napetraka).
Fedora IoT (Internet an'ny zavatra): Izy io dia fanontana ny Fedora izay manome fototra mafy orina ho an'ny tontolo iainana IoT. Mety tsara ho an'ny tetikasa mifandraika amin'ny trano izy io, toy ny amin'ny vavahady indostrialy, tanàna maranitra na analytics miaraka amin'ny AI / ML. Ho fanampin'izay, manome sehatra loharano malalaka azo itokisana izy hananganana fototra mafy orina sy havaozina.
Tetikasa vao misondrotra sy loharanom-pahalalana azo ampiasaina
ny hafa tetikasa sy loharanon-karena misy dia:
Wiki: Fitaovana fiaraha-miasa ho an'ny fiarahamonina goavambeo.
gazety: Tranonkala fampahalalana sy vaovao ho an'ny fiarahamonina misy anao.
Alt Downloads: Fizarana izay manome kinova hafa an'ny Fedora.
Docs: Fizarana izay manangona, manasongadina ary manolotra ny antontan-taratasin'ireo mpampiasa ilaina rehetra.
Spins: Tetikasa manome Editions (Spins) an'ny Fedora amin'ny tontolon'ny Desktop hafa ankoatry ny GNOME.
Fedora Labs: Fizarana manolotra fisafidianana atiny voafantina ho atiny sy rindrambaiko miompana amin'ny tanjona, arakaraky ny fehin'ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina Fedora.
CoreOS: Rafitra fiasa minimalista, miaraka amin'ny fanavaozana mandeha ho azy ary mifantoka amin'ny kaontenera. Ny tanjon'izy ireo dia ny hanome ny mpampiantrano fitoeran-javatra tsara indrindra hitantana ny entana am-pitoerana am-pilaminana sy amin'ny ambaratonga.
Silverblue: Rafitra miasa amin'ny birao tsy azo ovaina (tsy azo ovaina) natao hanomezana fanohanana tsara ny fizotran'entana mifototra amin'ny fitoeram-bokatra. Ity variana amin'ny Fedora Workstation ity dia mikendry ireo vondrom-piarahamonina mpamorona.
naoty: Amin'ny lahatsoratra manaraka dia handinika bebe kokoa momba izany isika Fedora Silverblue.
Raha fintinina, araka ny hita, dia izao ny "Tetikasa Fedora" dia ny valin'ny a Community of Users, Developers tena tsara ary ireo matihanina hafa, izay namokatra fivoarana tena malalaka sy malalaka, ary loharanom-pahalalana manampy amin'ny Internet ho an'izay maniry sy mila azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Tetikasa Fedora: fahalalana ny fiarahamonina misy anao sy ny fivoarany ankehitriny
Testingsi dia hoy izy:
Azo itokisana izany Fedora izany, tsy izany no izy. Azo itokisana amin'ny resaka fiarovana, mazava ho azy. Saingy indrisy amin'ny fitoniana, na ho ela na ho haingana dia tsy hahomby anao ary hanome anao olana lehibe, satria maranitra be toy ny andohalambo izy ireo rehefa tsy ampoizinao fa ho tapaka izany na raha. Fedora no fizarana tiako indrindra, miaraka amin'io gnome lehibe io fa tsy misy gnome hafa toa azy amin'ny tontolo Linux iray manontolo. Fa satria amin'ny farany dia tapaka ihany izany, tsy ampiasaiko izany. Raha ny tokony ho izy dia ny fitsapana debian, raha ny tena izy dia ny tsy fantatra lehibe ary mino ny olona fa satria antsoina hoe fanandramana dia efa manapotika anao, mazava ho azy fa fizahan-toetra izany, hahaha, raha manandramana izy io fa mpandala ny nentin-drazana kokoa noho ny Fedora, andohalambo ary mihinana aza. . Ireo fonosana tonga amin'ny fitsapana dia efa suuuper nojerena ary farafaharatsiny afaka manome anao olana kely izy ireo, saingy tsy misy zavatra matotra tokony hamerenanao amin'ny laoniny, raha tsy hoe mampiasa fitsapana amin'ny kde sy nvidia ianao dia eny, hahatratra anao izany. Niaraka tamin'ny fitsapana nandritra ny 3 taona aho ary io no fizarana nanome ahy olana kely indrindra, manokana, olana aotra, nanana olana bebe kokoa tamin'ny debian marin-toerana aho fa tsy tamin'ny fitsapana. Fedora vaky, tsy lazaiko anao akory, ary manjaro tapaka koa. Ny fitsapana an'i Debian, tsy vaky, fitoniana amin'ny endrika madio indrindra.
Valiny ho an'i Testingsi
Miarahaba anao, Testingsi. Misaotra anao noho ny hevitrao sy ny hevitrao avy amin'ny zavatra niainanao tamin'ny Fedora sy Debian Testing.
Izay rehetra nampiasa an'i Fedora tao anatin'ny 5 taona lasa dia mahalala fa tsy manan-javatra hitsiriritra an'i Debian izy amin'ny fitoniana ary mazava ho azy fa Arch amin'ny fananana rafitra nohavaozina. Ankoatr'izay, ireo haitao manaparitaka, izay isaina, na taloha na tsara kokoa amin'ny Fedora noho ny ao amin'ny Arch, noho ny antony tsotra hoe avy any Fedora izy ireo. Tsy misy ifandraisany amin'ilay lahatsoratra ny hevitrao ary angamba nanakorontana ny fanahy fotsiny ianao no niditra. Ny Fedora Workstation dia milamina toy ny debian nefa tsy lany andro ary maoderina toy ny andohalambo nefa tsy mamaky fitoniana
Ny lahatsoratra dia tsara ary manantena ny famerenana ny Fedora silverblue aho.
Izaho dia mpampiasa Fedora Workstation sy Silverblue. Izaho dia mpampiasa debian taloha, openSUSE, Ubuntu, manjaro, andohalambo, resy lahatra fa anio, ny distro linux tsara indrindra dia ny: Fedora Workstation
@Testingsi, tena tsy fantatra marina ny fitsapana an'i Debian, ekeko: ampiasain'ny olona nefa tsy fantany ny antsipiriany. Raha miresaka filaminana tsara any Fedora ianao fa tsy fitoniana, ny fitsapana an'i Debian dia mijaly noho ny tsy fahampian'ny roa tonta, amin'ny lafiny iray dia tonga * farafaharatsiny * herinandro aorian'ny fitomboan-trano (diniho ny boky torolàlana momba ny famerenana ireo kitapo famerenana amin'ny fitsapana), ka afaka volana maromaro ianao miaraka amin'ny Firefox lany daty na fonosana manan-danja tapaka noho ny politikany fanavaozana, azonao atao ny manisy pince raha mbola tsy misy fifanolanana amin'ny dikan-teny, ary efa fantatray ireo olana mifamatotra izay entin'ireo kinova ao amin'ilay maodelin'ny fampandrosoana rindrambaiko maimaimpoana.
Miarahaba anao, Autopilot. Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy ny fandraisanao anjara.